Hebei Jinmai Casting Co., Ltd dia hanatrika ny 124th Ny INSEE dia Fair - China Hebei Jinmai Casting
Hebei Jinmai Casting Co., Ltd dia hanatrika ny 124th Canton Fair
Ny INSEE dia Fair 124th dia natao tao Guangzhou tamin'ny 15 Oktobra, 2018.
Hebei Jinmai Casting Co., Ltd. dia mitarika mpanamboatra ny mora volavolaina vy mety orinasa sodina.
Fittings ny sodina no niaritra toetra hentitra fisafoana. Andian-dahatsoratra telo samy hafa dia mifanaraka amin'ny BS Standard NPT sy Din Standard.
Maherin'ny 30 taona ny famokarana traikefa, naondrana tany amin'ny firenena 40 mahery manerana izao tontolo izao. Product tsara no eken'ny izao tontolo izao!
Tonga soa eto mpanjifa vaovao sy tranainy mba hitsidika ny trano rantsankazo ho fantatra momba ny vokatra sy ny orinasa
Post fotoana: Aug-07-2018